[OFFICIAL] Phinda Data kusuka iOS Kudivayisi - Indlela-Umhlahlandlela
Thola waqala, uthole okusemqoka
dr.fone yamathuluzi - iOS Idatha yokutakula: Indlela
Ingxenye 1. Phinda Data kusuka iOS Kudivayisi Ngqo
Ingxenye 2. Phinda Data kusuka ku-iTunes Backup
Ingxenye 3. Phinda Data kusuka ICLOUD Backup
Isinyathelo 1. Xhuma iOS neDivaysi Computer
Qalisa dr.fone yamathuluzi kukhompyutha yakho. Sebenzisa ikhebula le-USB eliza kudivayisi yakho ye-iOS ukuxhuma iPhone, iPad noma iPod touch yakho, kwikhompyutha yakho. Chofoza ku "Data Recovery" bese ukhetha "Phinda kusuka iOS Kudivayisi" okukhethwa kukho.
Amathiphu: Ngaphambi egijima dr.fone, wena ngabe ulande inguqulo yakamuva ye iTunes. Ukuze ugweme ngokuzenzakalelayo ukuvumelanisa, musa ukuqalisa iTunes lapho egijima dr.fone yamathuluzi. I asikisela ukuvimbela ukuvumelanisa automatical iTunes ngaphambili: ukuqalisa iTunes> Izintandokazi> Amadivaysi, hlola "Uvikele ngomakhalekhukhwini nama-iPod, iPhone, kanye iPads ivumelanise ngokuzenzakalelayo".
Isinyathelo 2. Skena Kudivayisi lakho idatha elahlekile kuLo
Vele uchofoze inkinobho "Qala Scan" ukuvumela lolu hlelo scan iPhone, iPad noma iPod touch yakho ukuskena idatha asusiwe noma ilahleke. I ukuskena g inqubo ingase ihlale imizuzu embalwa, kuye ngokuthi inani idatha kudivayisi yakho. Phakathi nenqubo ukuskena, uma ubona ukuthi idatha oyifunayo kukhona ke ungakwazi chofoza inkinobho "Misa okwesikhashana" ukuyeka umsebenzi.
Isinyathelo 3. kuqala le amakhasi Idatha
Iskena kuzothatha isikhathi esithile. Uma ngabe kuphelile, ungabona Chile scan eyenziwe uhlelo. Idatha kokubili elahlekile futhi ekhona kudivayisi yakho ziboniswa izigaba. Ukuhlunga idatha isusiwe kudivayisi yakho ye-iOS, ungaswayiphela ukhetho "ukubonisa izinto ezisusiwe kuphela" ukuthi kuvuleke. Ngokuchofoza uhlobo lwefayela e ohlangothini lwesobunxele, ungakwazi kuqala idatha etholakele. Futhi ungakwazi ukubona kukhona ebhokisini lokusesha ngakwesokudla phezulu ewindini. Unga cinga ifayela ethize ngokuthayipha igama elisemqoka ebhokisini lokusesha.
Isinyathelo 4. Phinda Data kusuka ku-iPhone / iPad / iPod yakho touch
Uma uthola idatha okudingayo, nje ukubeka isheke uphawu phambi ibhokisi ukuze ukhethe kubo. Ngemva ke, qhafaza inkinobho ethi "Phinda" ezansi kwesokudla sewindi. Ngokuzenzakalelayo, idatha walulama uyakusindiswa kwikhompyutha yakho. Njengoba for imiyalezo, iMessage, oxhumana nabo, noma amanothi, uma uchofoza Buyisa, pop-up ngeke akucele ukuba "Phinda Computer" noma "Phinda kudivayisi". Uma ufuna ukubeka le milayezo emuva kudivayisi yakho ye-iOS, chofoza "Phinda kudivayisi".
Isinyathelo 1. Khetha Imodi yokutakula
Qalisa dr.fone bese ukhetha "Phinda kusuka iTunes Backup ifayela" kusukela "Data Recovery" ithuluzi. Ngemva ke, iTunes ithuluzi alulame isipele ngeke bona bonke iTunes amafayela yokusekelayo kule khompyutha uphinde ukubonise ewindini. Ungaqinisekisa ukuthi yisiphi Nguye udinga ngokuvumelana usuku selidaliwe.
Isinyathelo 2. Scan Idatha kusuka ku-iTunes Backup File
Khetha iTunes ifayela yokusekelayo equkethe idatha ofuna sokusukuma futhi chofoza "Qala Scan". Kuzothatha imizuzu embalwa ukuze kukhishwe yonke idatha kusuka ifayela iTunes isipele. Iba nesineke.
Isinyathelo 3. Hlola kuqala bese Phinda Data kusuka ku-iTunes Backup
Ngemva imizuzwana embalwa, yonke idatha ku ifayela yokusekelayo uzobe ekhishwe futhi uboniswa izigaba. Ungahlola kuqala ngayinye ngayinye ngaphambi yokutakula. Khona-ke ungakwazi ngokukhetha uphawu futhi ukubuyisa lokho ofuna ngokucindezela inkinobho "Buyisa" ngezansi. Manje oxhumana nabo, amanothi kanye nemiyalezo kungenziwa ngqo livuke kudivayisi yakho ye-iOS uma uqhubeka kudivayisi yakho ye-iOS exhunywe ne kwikhompyutha yakho nge ikhebula le-USB phakathi kwenqubo yokutakula.
Amathiphu: ungabona kukhona ibhokisi lokusesha ku yi iwindi. Kusuka lapho, ungakwazi uthayiphe igama ifayela ukukufuna.
Emva egijima dr.fone yamathuluzi, ukhethe imodi alulame "Buyisa ku ICLOUD Backup Amafayela" kusukela "Data Recovery" kuyi-dashboard. Khona-ke uzobona iwindi ngezansi. Faka i-akhawunti yakho iCloud nephasiwedi ukungena ngemvume. dr.fone kuthatha ubumfihlo bakho sina. Asilokothi ukugcina irekhodi iyiphi Apple-akhawunti yakho ye ulwazi noma okuqukethwe nganoma isiphi isikhathi phakathi nokuqulwa zakho.
Isinyathelo 2. Download iCloud Isipele Ifayela
Uma ungene ngemvume ku-iCloud, uhlelo ungathola yonke iCloud amafayela isipele ku-akhawunti yakho. Khetha eyodwa lapho oya khona ukuze alulame idatha bese uchofoza inkinobho ethi "Landa".
Bese ku-pop-up, ungakhetha uhlobo amafayela ungathanda ukulanda. Lokhu kuzokwehlisa isikhathi ukulanda ifayela iCloud eyisipele. Ngemva kwalokho, ungakwazi scan okuqukethwe iCloud manje. Chofoza inkinobho ethi "Scan" ukuze uqale. Kuzothatha isikhathi esithile. Vele ukulinda isikhashana.
Isinyathelo 3. Hlola kuqala bese Phinda Data kusuka ICLOUD Isipele Ifayela
Iskena kuzokuphela emva kwamaminithi ambalwa. Uma uyama, ungakwazi ukuhlola kuqala cishe yonke idatha ku ifayela lakho iCloud isipele, efana noxhumana nabo, imibiko, izithombe, nokuningi. Hlola ngayinye ngayinye bese ubeka luphawu nto ofuna. Bese uchofoza ku- "Phinda Computer" noma "Phinda kudivayisi yakho" inkinobho ukuzilondoloza kukhompyutha yakho noma idivayisi yakho ngokuchofoza okukodwa.
Manje nabo, imibiko kanye namanothi kungenziwa ngqo livuke kudivayisi yakho ye-iOS uma iPhone, iPad noma iPod touch yakho ixhunyiwe nge computer yakho ngekhebula le-USB phakathi kwenqubo yokutakula.
Faka, Isibuyekezo, Khipha